FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISpanish Intetho Yezandla YaseMerika Intetho Yezandla yaseBrazil Intetho Yezandla yaseChile Intetho Yezandla yaseMexico Intetho Yezandla yasePersi Intetho Yezandla yaseRashiya Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAcholi IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBashkir IsiBhulu IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCreole saseSeychelles IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiHausa IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKorea IsiKrio IsiKwanyama IsiLatvia IsiLhukonzo IsiLithuania IsiLuganda IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMaya IsiNgesi IsiNorway IsiOssetia IsiPangasina IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuechua (saseCuzco) IsiRashiya IsiRomania IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTajiki IsiTatar IsiThai IsiTongan IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkmen IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUrdu IsiUzbek IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
YINTONI esinokuyenza ukuze sivuyise uThixo? Ngaba ikho into esinokumnika yona?— UYehova uthi: “Zezam zonke izilwanyana zasendle ezisehlathini.” Kwakhona uthi: “Yeyam isilivere, negolide yeyam.” (INdumiso 24:1; 50:10; Hagayi 2:8) Sekunjalo, ikho into esinokumnika yona uThixo. Yintoni leyo?—
UYehova uyasivumela ukuba sikhethe enoba siyafuna kusini na ukumkhonza okanye akunjalo. Akasinyanzeli ukuba senze oko afuna sikwenze. Makhe sibone isizathu sokuba uThixo esenze sakwazi ukukhetha enoba sifuna ukumkhonza okanye ukungamkhonzi.
Usenokuba uyazi ukuba kukho oomatshini bokwenza imisebenzi ethile edla ngokwenziwa ngabantu. Aba matshini benziwe ngendlela yokuba benze nantoni na efunwa ngumenzi wabo. Abanakuzikhethela into amabayenze. UYehova ngewayesidale safana naba matshini. Ngewayesidalele ukuba senze kuphela oko afuna sikwenze. Kodwa uThixo akazange ayenze loo nto. Ngaba uyasazi isizathu soko?— Kaloku, ezinye izinto zokudlala zifana naba matshini sisandul’ ukuthetha ngabo. Xa ucofa iqhosha, benza kuphela loo nto babenzelwe ukuba bayenze. Ngaba wakhe wayibona into yokudlala enjalo?— Abantu badla ngokudinwa kukudlala ngento eyenza nje kuphela loo nto yayenzelwe yona. UThixo akafuni simthobele ngenxa nje yokuba singoomatshini abenzelwe ukumkhonza. UYehova ufuna simkhonze ngenxa yokuba simthanda nangenxa yokuba sifuna ukumthobela.
Kutheni uThixo engazange asidale sifane nalo matshini?
Ucinga ukuba uBawo wethu osezulwini uvakalelwa njani xa simthobela kuba sithanda ukwenjenjalo?— Khawundixelele, ucinga ukuba abazali bakho bavakalelwa njani yindlela ozenza ngayo izinto?— IBhayibhile ithi unyana olumkileyo “umenza abe nemihlali uyise,” kodwa unyana osisiyatha “uyintlungu kanina.” (IMizekeliso 10:1) Ngaba uphawule ukuba xa usenza oko umama notata wakho bacela ukuba ukwenze, bayavuya?— Kodwa bavakalelwa njani xa ungabathobeli?—
Unokumvuyisa njani uYehova nabazali bakho?
Ngoku makhe sicinge ngoBawo wethu osezulwini, uYehova. Uyasichazela indlela esinokumvuyisa ngayo. Nceda uthabathe iBhayibhile yakho uze utyhile kwiMizekeliso 27:11. Apha uThixo usixelela oku: “Yiba nobulumko, nyana wam [okanye, sisenokuthi, ntombi yam], uze uyenze ibe nemihlali intliziyo yam, ukuze ndimphendule ondingcikivayo.” Ngaba uyazi ukuba kuthetha ntoni ukungcikiva?— Kaloku, umntu usenokukungcikiva ngokukuhleka esithi akukwazi ukwenza into obuthe wena unako ukuyenza. USathana umngcikiva njani uYehova?— Makhe sibone.
Khumbula, kwiSahluko 8 sale ncwadi sifunde ukuba uSathana ufuna ukuba ngoyena ubalulekileyo yaye ufuna ukuthotyelwa ngumntu wonke. USathana uthi abantu banqula uYehova kuphela kuba eza kubanika ubomi obungunaphakade xa bemnqula. Emva kokuba uSathana enze uAdam noEva ukuba bavukele uYehova, wamcel’ umngeni uThixo. Wathi kuThixo: ‘Abantu bakukhonza kuphela ngenxa yoko ubanika kona. Ndinike nje ithuba yaye ndinokubenza bonke bakushiye.’
Emva kokuba uAdam noEva bonile, uSathana wamcel’ umngeni njani uYehova?
Enyanisweni, loo mazwi akabhalwanga kanye ngolo hlobo eBhayibhileni. Kodwa xa sifunda ngendoda enguYobhi, kuyacaca ukuba uSathana wakha wayithetha into enjalo kuThixo. Ngokwenene yayibalulekile kuSathana nakuYehova into yokuba uYobhi wayeza kuqhubeka ethembekile na kuThixo. Makhe sityhile iiBhayibhile zethu kuYobhi isahluko 1 nesesi-2 size sibone oko kwenzekayo.
Phawula kuYobhi isahluko 1 ukuba uSathana ukho naye ezulwini xa iingelosi zisiza phambi kukaYehova. Ngoko uYehova umbuza oku uSathana: “Uvela phi na?” USathana uphendula ngelithi ebezulazula nje emhlabeni. Ngoko uYehova uyambuza: ‘Ngaba ubonile ukuba uYobhi uyandikhonza yaye akakwenzi okubi?’—Yobhi 1:6-8.
USathana ukhawuleza akuphikise oko ngelithi: ‘UYobhi ukukhonza kuphela ngenxa yokuba engenazingxaki. Ukuba uyayeka ukumkhusela nokumsikelela, uya kukuqalekisa.’ Ngoko uYehova uphendula ngelithi: ‘Kulungile ke Sathana, ungakwenza konke ofuna ukukwenza kuye, kodwa ungamenzakalisi yena uYobhi.’​—Yobhi 1:9-12.
Wenza ntoni uSathana?— Wenza ukuba abantu bebe iinkomo needonki zikaYobhi baze babulale nabelusi bazo. Emva koko umbane ubulala iigusha nabelusi bazo. Kamva, kufika abantu baze bebe iinkamela bebulala nabelusi bazo. Ekugqibeleni, uSathana ubangela ukuba kubekho isaqhwithi esidiliza indlu enabantwana bakaYobhi abalishumi, yaye bafa bonke. Nakuba kunjalo, uYobhi uyaqhubeka ekhonza uYehova.​—Yobhi 1:13-22.
Xa ephinda ebona uSathana, uYehova umxelela ukuba uYobhi usaqhubeka ethembekile. USathana uphikisa ngelithi: ‘Ukuba uyandivumela ndimvise iintlungu emzimbeni, uya kukuqalekisa.’ Ngoko uYehova uyamvumela uSathana ukuba amvise iintlungu uYobhi kodwa umlumkisa ngelithi angambulali.
Yintoni eyanyanyezelwa nguYobhi, yaye kutheni oku kumvuyisa uThixo?
USathana uhlasela uYobhi ngokuthi enze wonke umzimba wakhe ube namathumba. La mathumba anuka kakubi gqitha kangangokuba akukho mntu ufuna ukusondela kuye. Kwanomfazi kaYobhi uthi kuye: “Mqalekise uThixo uze ufe!” Abo bazenza abahlobo bakaYobhi bayamtyelela baze bamngcungcuthekise kakhulu ngokuthi unobangela wale ngxaki zizinto ezimbi gqitha aye wazenza. Nakuba uYobhi eviswa intlungu nguSathana, uyaqhubeka ekhonza uYehova ngokuthembeka.​—Yobhi 2:1-13; 7:5; 19:13-20.
Ucinga ukuba uYehova wavakalelwa njani kukuthembeka kukaYobhi?— Kwamvuyisa, kuba uYehova wayenokuthi kuSathana: ‘Khawujonge uYobhi! Undikhonza ngenxa yokuba efuna.’ Ngaba uya kufana noYobhi, ube ngumntu uYehova anokumalatha njengomzekelo ongqina uSathana elixoki?— Ngokwenene, kulilungelo ukuphendula ibango likaSathana lokuba unokwenza nabani na ayeke ukukhonza uYehova. Ngokuqinisekileyo uYesu wakugqala kulilungelo oko.
UMfundisi Omkhulu akazange amvumele uSathana ukuba amenzise nantoni na. Cinga nje ngendlela umzekelo wakhe owamvuyisa ngayo uYise! UYehova unokwalatha kuYesu aze aphendule uSathana ngelithi: ‘Khawukhangele uNyana wam! Uye waqhubeka ethembekile kum kuba endithanda!’ Khawucinge nje nangendlela uYesu awaba nemincili ngayo kuba evuyise intliziyo kaYise. Ngenxa yaloo mincili, uYesu wada wanyamezela ukufa kwisibonda sentuthumbo.​—Hebhere 12:2.
Ngaba uyafuna ukuba njengoMfundisi Omkhulu uze uvuyise intliziyo kaYehova?— Ngoko qhubeka ufunda ngoko uYehova afuna ukwenze, uze umvuyise ngokukwenza oko!
Funda ngoko kwenziwa nguYesu ukuze avuyise uThixo, nangoko thina sifanele sikwenze, kwiMizekeliso 23:22-25; kuYohane 5:30; 6:38; 8:28 nakweyesi-2 kaYohane 4.
Ubusazi ukuba izinto ozenzayo zinokumkhathaza okanye zimvuyise uYehova? Funda ngendlela uAdam noEva abamkhathaza ngayo uYehova.
Phulaphula, Thobela Uze Usikelelwe (Ingoma 120)